Mogadishu Journal » Axmed Madoobe iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada Muqdisho
Mjournal : — Waxaa goor dhaw ka degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho wafdi uu hogaaminayo Sheekh Axmed Max’ed Islaam [Axmed Madoobe] hogaamiyaha maamulka Jubba iyo wafdi uu hogaaminayo oo ka soo kicitimay magaalada Kismaayo.
Wafdiga uu hogaaminayo Axmed Madoobe waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan labada golle ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ka koobnaa wasiiro iyo xildhibaanno.
Dhawaan ayeey aheyd markii dowladda Soomaaliya iyo Maamulka Jubba hishiis ku gaareen magaalada Addis Ababa, waxaana qodobo qaar heshiiska ahaa in Axmed Madoobe labo sano si KMG ah u hogaamiyo Jubooyinka iyo in dekeda iyo Air Porka lix bilood maamulo kadibna lagu soo wareejiyo dowladda.
Axmed Madoobe oo shir jaraa’id ku qabtay labo cisho ka hor magaalada Kismaayo ayaa sheegay in uu dhawaan gaari doono magaalada Muqdisho, sidoo kalana Kismaayo laga filayo in uu soo gaaro madaxweyne Xassan Sheekh Max’uud kadib booqashada wafdiga Jubba ee magaalada Muqdisho.
Wafdiga uu hogaaminayo Axmed Madoobe ayaa loo galbiyay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya oo la filayo in ay kulan gaar ah kula qaataan madaxweynaha dowladda Soomaaliay Xassan Sheekh Max’uud.
Sheekh Axmed Madoobe waxaa magaalada Muqdisho ugu danbeysay sanadkii 2009-kii, kadib markii ay dowladdii uu hogaaminayay madaxweyihii hore Shariif Sheekh Axmed ka sii deysay dowladda Itoobiya oo uu xirnaa, laakiin markii uu waqtigaa gaaray magaalada Kismaayo ayuu ku gacan seray xiriirkii dowladdii ku-meel-gaarka ee waqtigaa jirtay, isaga oo ku biiray ururkii Xisbul Islaam.
Lama oga waqtiga ay qaadaneyso booqashada Axmed Madoobe uu ku yimid magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.